I-RFP360: Ubuchwepheshe obuvelayo bokukhipha ubuhlungu kuma-RFPs | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 15, 2019 NgoMsombuluko, Okthoba 14, 2019 U-Beau Wysong
Ngisebenzise wonke umsebenzi wami ekuthengiseni nasekukhangiseni isoftware. Ngihlosile ukuletha imikhondo eshisayo, ukusheshisa umjikelezo wokuthengisa, nokuwina amadili - okusho ukuthi ngitshale amakhulu amahora empilo yami ngicabanga, ngisebenza futhi ngiphendula ama-RFPs - ububi obudingekayo uma kukhulunywa ngokuwina ibhizinisi elisha .
Ama-RFPs abelokhu ezwa njengokujahwa kwephepha okungapheli - inqubo ehamba kancane ngokudabukisayo edinga ukuzingela izimpendulo ezivela ekuphathweni komkhiqizo, ukwenza izingxabano nezomthetho, izinkinga zokuxazulula inkinga nge-IT, nokuqinisekisa izinombolo ngezimali. Labo abajwayelekile bayazi - uhlu luyaqhubeka. Ochwepheshe bezokumaketha, abathengisayo nabathuthukisa amabhizinisi bachitha amahora amaningi ngokungaphenya izimpendulo ezedlule zemibuzo ephindaphindwayo, bejaha izimpendulo zemibuzo emisha, beqinisekisa imininingwane futhi befuna ukugunyazwa kaninginingi. Le nqubo iyinkimbinkimbi, idla isikhathi futhi inzima kunoma yiziphi izinsiza kusebenza zenhlangano.
Ngaphandle kokuvela ngokushesha kobuchwepheshe, kumabhizinisi amaningi, inqubo ye-RFP ishintshe okuncane kakhulu kokuhlangenwe nakho kwami ​​ekuqaleni komsebenzi wami ngaphezu kweminyaka eyishumi edlule. Amaqembu wokumaketha asasebenzisa izinqubo zamandla ukuhlanganisa iziphakamiso, kusetshenziswa izimpendulo ezisuselwa kunoma iyiphi imithombo yemithombo engahlala kuma-spreadsheet e-Excel, amadokhumenti we-Google abiwe ngisho nezinqolobane ze-imeyili.
Lokho kusho, hhayi nje kuphela ukuthi sifisa kakhulu ukuthi inqubo ye-RFP isebenze kahle, imboni iqala ukuyifuna, okuyilapho i-software evelayo imi khona ukuze ibe nomthelela omkhulu endaweni ye-RFP.
Izinzuzo ze-RFP Software
Ngaphandle kokwenza ukwakhiwa kwe-RFP kungabi buhlungu kangako; ukusungula inqubo esheshayo, ephindaphindwayo yama-RFPs kungaba nomthelela oqondile emalini engenayo. Yilapho ubuchwepheshe obuvelayo be-RFP bungena khona.
Isoftware ye-RFP igxila futhi ikhathalogi imibuzo ejwayelekile nezimpendulo kumtapo wezincwadi wokuqukethwe. Eziningi zalezi zixazululo zisuselwa emafini futhi zisekela ukusebenzisana ngesikhathi sangempela phakathi kwezimenenja zeziphakamiso, ochwepheshe bezindaba nezigunyazi ezisezingeni eliphezulu.
Ngokuqondene, I-RFP360 inika amandla abasebenzisi ngokushesha:
Gcina, thola uphinde usebenzise okuqukethwe nge-Custom Base Base
Sebenza nabantu osebenza nabo kunguqulo efanayo yedokhumenti eyodwa
Nika imibuzo, landela inqubekela phambili futhi wenze ngezifiso izikhumbuzi
Shintsha izimpendulo nge-AI ekhomba imibuzo bese ukhetha impendulo efanele
Finyelela i-Knowledge Base futhi usebenze kuziphakamiso ku-Word, Excel naku-Chrome ngama-plug-ins.
Ngenxa yalokhu, abasebenzisi be- I-RFP360Isixazululo sokuphathwa kweziphakamiso sibike ukuthi bakwazile ukunciphisa kakhulu izikhathi zokuphendula, bakhuphula inani lama-RFP abakwaziyo ukuwaqedela futhi, ngasikhathi sinye, bathuthukisa amazinga abo wokuwina jikelele.
Siphendule kuma-RFP angamaphesenti angama-85 kulo nyaka kunalokho esikwenzile ngonyaka odlule, futhi sinyuse izinga lethu lokuthuthuka ngamaphesenti ayi-9.
U-Erica Clausen-Lee, isikhulu samasu amakhulu ne-InfoMart
Ngezimpendulo ezisheshayo, uzoba namathuba amaningi wokuletha izimpendulo ezingaguquguquki, ezinembile nezisebenza kahle ezingase ziwine ibhizinisi.
Thuthukisa ukuvumelana kwe-RFP
Besebenzisa i-Knowledge Base yesikhulumi, abasebenzisi bangagcina kalula, bahlele, baseshe futhi baphinde basebenzise okuqukethwe kwesiphakamiso esedlule, babanikeze ithuba lokuqala izimpendulo ze-RFP. Ihabhu elimaphakathi lokuqukethwe kwesiphakamiso ligcina iqembu lakho lingazibhali kabusha izimpendulo ezikhona, likuvumela ukuthi uqoqe idatha futhi ugcine izimpendulo ezinhle kakhulu ezizosetshenziswa esikhathini esizayo.
Sinokuvikeleka kokwazi ulwazi lwethu luphephile futhi aluhambisani. Akudingeki sikhathazeke ngokuthi sizolahlekelwa yibuphi ubuchwepheshe be-SME uma othile eyeka noma ethatha iholide. Asichithi amahora amaningi sizingela izimpendulo ezedlule futhi sizama ukuthola ukuthi ubani owenzani ngoba yonke imibuzo nezimpendulo zilapho lapho ku-RFP360.
UBeverly Blakely Jones ovela ku-National Geographic Learning | Isifundo Samacala E-Cengage
Thuthukisa Ukunemba kwe-RFP
Izimpendulo ezingalungile noma eziphelelwe yisikhathi zingakhohlisa ukubamba, ngisho nelungu leqembu elinolwazi kakhulu. Uma ubhangqwe nomnqamulajuqu ovame ukuvela osheshayo ku-RFP, ubungozi bokuhlinzeka ngemithombo yokwaziswa enamaphutha. Ngeshwa, imininingwane enganembile futhi ingabiza ngokweqile ngoba ingakulahlekisela lona kanye ibhizinisi ohlose ukulenza. Impendulo ye-RFP engalungile ingaholela ekukhishweni ekucabangeni, ezingxoxweni ezinde, ekubambezelekeni kokuthola izinkontileka noma okubi kakhulu.
Isoftware ye-RFP esekwe emafini ixazulula le nkinga ngokuvumela amaqembu ukuthi abuyekeze izimpendulo zawo kusuka noma yikuphi nganoma yisiphi isikhathi ngokuzethemba kokwazi ushintsho kuboniswa uhlelo olubanzi.
Isibonelo, lolu hlobo lokusebenza luyithuluzi elihle onalo lapho umkhiqizo noma insizakalo ibuyekezwa kaningi okudinga ukufakwa empendulweni ejwayelekile. Ezimweni eziningi, lapho kubhekene nalolu hlobo loguquko, amaqembu kufanele asebenzise lonke ishadi lenhlangano ukuqinisekisa ukuthi izibuyekezo zamukelwa ezikhungweni bese zilandelela ilungu ngalinye ukuqinisekisa ukuthi zenziwe ezingeni lomuntu ngamunye ngenkathi ziphinde zihlole isiphakamiso ngasinye ngaphambi kokuba Phuma. Kuyakhathaza.
Isoftware ye-RFP esekwe emafini ilawula lezi zinguquko kulo lonke ibhizinisi futhi isebenza njengendawo eyodwa yokuhlanza yokuvela kokuqukethwe.
Thuthukisa ukusebenza kwe-RFP
Inzuzo enkulu yesoftware ye-RFP ukuthi ukusebenza ngokushesha kuthuthukiswa kanjani - ngendlela yayo, isikhathi esisithathayo ukwakha i-RFP kusetshenziswa lolu hlobo lobuchwepheshe siqhathaniswa nomehluko phakathi kokushayela ugu nogu nokundiza. Izixazululo eziningi zesoftware ye-RFP, kufaka phakathi i-RFP360, nayo isuselwa emafini, evumela ukuthunyelwa okusheshayo, okusho ukuthi imiphumela icishe ifike ngokushesha.
Isikhathi sokubaluleka (i-TtV) umbono wokuthi kukhona iwashi elilandelela ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ikhasimende kusuka kwinkontileka esayiniwe ukuya 'ku-ah-ha moment' lapho beqonda ngokugcwele inani futhi bevula amandla wesoftware. Kwisoftware ye-RFP, lo mzuzu uvame ukwenzeka emasontweni ambalwa ngemuva kokuthi inkontileka isayiniwe lapho umsebenzisi esebenza nethimba lesipiliyoni samakhasimende ku-RFP yabo yokuqala. Izimpendulo ezijwayelekile nesiphakamiso sokuqala zilayishwa ohlelweni, bese kuthi umzuzu we-ah-ha - isoftware iyayibona imibuzo bese ifaka izimpendulo ezifanele, igcwalise ngokwesilinganiso cishe amaphesenti angama-60 kuye kwangama-70 we-RFP - ngesikhathi somzuzwana.
Sithole ukuthi isikhombimsebenzisi se-RFP360 sasinembile kakhulu futhi kulula ukusukuma sisebenze. Kube khona ijika lokufunda elincane kakhulu kithi, futhi livumele ukusebenza kwethu kwanda cishe khona manjalo.
U-Emily Tippins, Umphathi Wezentengiso weSondlo Seswishi | Ucwaningo lwesigameko
Ukuvela kwenqubo ye-RFP kunika abasebenzisi isikhathi sokubuyela emuva ukuze bagxile ezingeni eliphezulu, ezinhlelweni zamasu.
Kusenze sasebenza kahle kakhulu. I-RFP360 isibuyisele isikhathi sethu futhi yasivumela ukuthi sikhethe futhi sikhethe amaphrojekthi ethu. Asisahluphi. Singadonsa umoya, sigxile ekwenzeni amasu futhi siqiniseke ukuthi sikhetha amaphrojekthi afanele futhi sinikeze izimpendulo zekhwalithi.
UBrandon Fyffe, osondelene nokuthuthukiswa kwebhizinisi eCareHere
I-RFP Technology Kumele-Haves
Ibhizinisi elingaphezu kwama-RFPs - Isoftware yokuphendula ayisiyo eye-RFPs kuphela, futhi ungaphatha izicelo zolwazi (ama-RFIs), imibuzo yokuphepha nokukhuthazeka (DDQs), izicelo zeziqu (RFQs) nokuningi. Ubuchwepheshe bungasetshenziselwa noma yiluphi uhlobo lombuzo kanye nefomu lezimpendulo elinezimpendulo eziphindaphindwayo.
Ukusetshenziswa nokusekelwa okuhle kakhulu - Akuwona wonke umuntu osebenza kuma-RFPs ungumsebenzisi omkhulu. Ama-RFP adinga okokufaka okuvela eminyangweni eminingi nakubachwepheshe bezihloko abanamazinga ahlukahlukene ekhono lobuchwepheshe. Khetha isisombululo esisebenziseka kalula futhi enembile ngokusekelwa kwamakhasimende okuhle kakhulu.
Isipiliyoni nokuqina - Njenganoma yimuphi umhlinzeki wezobuchwepheshe be-SaaS, ungalindela ukuvuselelwa nokuthuthukiswa okujwayelekile kusuka kubuchwepheshe bakho be-RFP, kepha qiniseka ukuthi inkampani inolwazi lokuletha izici eziwusizo ongazethemba.
Isizinda Solwazi - Zonke izixazululo ze-RFP kufanele zifake ihabhu yokuqukethwe engasesheka evumela abasebenzisi bakho ukuthi basebenzisane kalula futhi banikeze izibuyekezo kuzimpendulo abazinikezwe. Funa isisombululo esisebenzisa i-AI ukufanisa imibuzo ejwayelekile nezimpendulo zabo.
Ama-plug-ins ahlakaniphile nokuhlanganiswa - Ubuchwepheshe be-RFP kufanele busebenze nezinhlelo ozisebenzisayo. Bheka ama-plug-ins akuvumela ukuthi usebenzise isisekelo sakho solwazi ngenkathi usebenza ekuphenduleni kwakho ezinhlelweni ezinjenge-Word noma i-Excel. Isoftware kufanele futhi ihlangane ne-CRM esemqoka kanye nezicelo zokukhiqiza ukusekela ngokukhululekile izinqubo zakho ze-RFP ezikhona.
Sula Isikhathi Esincane Futhi Uzuze Ama-RFP Amaningi
Ama-RFP imayelana nokuwina. Zenzelwe ukusiza umthengi anqume ukuthi ngubani ohamba phambili, futhi uma ushesha ukufakazela ukuthi ibhizinisi lakho lifanelana nomthethosivivinywa, kungcono. Isoftware ye-RFP isheshisa inqubo yakho ukukucabangela ngokushesha, ukuvala ibhizinisi futhi ikunikeze namathuba amaningi wokuwina.
Njengoba amaqembu wokumaketha aqondana ngokwengeziwe futhi esebenzisana nemisebenzi yemali engenayo, ubuchwepheshe be-RFP buba nzima kakhulu kunqubo. Isidingo sezimpendulo ze-RFP ezisheshayo asipheli. Ngakho-ke ungalindi uze ungabe usakwazi ukuyithatha ukwamukela ubuchwepheshe obongela isikhathi kuma-RFP akho. Oqhudelana nabo ngokuqinisekile ngeke.
Tags: isicelo sesiphakamisoi-rfpipulatifomu ye-rfpyisoswish yesondloisikhathi sokubalulekai-ttv
UBeau Wysong uyiChief Marketing Officer kwa I-RFP360. Usebenzisa isizinda sakhe esikhulu ekumaketheni kwezobuchwepheshe nasekuthengiseni ukushayela ukukhula kwebhizinisi lenkampani yesoftware. UBeau unesibopho sokwakha umkhiqizo ohola phambili emakethe, ukubandakanya amakhasimende nokufundisa amakhasimende esikhathi esizayo ngolwazi.